Xaragada qurxinta ee Xalane ee Afrika iyo qurbaha - Afrikhepri Fondation
Isniinta, Oktoobar 19, 2020
Un Afrikaan laba ka mid ah ayaa muslim ah. Muddo dheer ayaa la iska indhatiray ama si qaldan loo fahmay kooxda ka shaqaysa warshadaha qurxinta, baahiyaha quruxda ee dumarka muslimiinta ah, dhawr sano, waxaa bartilmaameedsaday mowjad cusub oo caan ah oo leh guulo soo koraya.
Sida laga soo xigtay shir Adduunka on Islamic dhaqaalaha oo lagu qabtay Dubai bishii la soo dhaafay, suuqa Muslim ah la isku qurxiyo iyo daryeelka shakhsi ahaaneed ayaa la filayaa in ay kor u dhow 74 2020% by gaarey 80 billion.
Qaybta suuqyadu way adag tahay in la qeexo.
Dadwaynaha adduunka ee muslimiinta ah ayaa badanaa lagu tilmaamay "bulsho caalami ah". Dhab ahaantii, waa mid ka mid ah qaybaha dhaqanka-dhaqameed, oo leh jihooyin juquraafi, jinsi iyo dhaqameed kala duwan. Isku-duwaha guud ee ugu weyn: qiimaha (iyo dhaqanka) ee Islaamka.
Afrika iyo qurba-joogyadaba waa malaayiin dad ah oo iimaan ah oo Muslim ah. Jiilasha cusubi aad bay u roon yihiin dunidan casriga ah, laakiin waxay weli aaminsan yihiin iimaankooda (ama xitaa ka badan jiilka waalidkooda). Helitaanka miisaan u dhexeeya dhaqanka iimaanka, dhaqanka quruxda iyo oggolaanshaha bulshadooda ayaa ku adkaan karta dumarka Muslimka ah.
"Xitaa haddii aadan qaniineynin naaskiisa, waxaynu cunnaa qayb wanaagsan! "...
Ereyga "Halal" waxaa loola jeedaa wax kasta oo sharcigu oggol yahay Sharciga Islaamka. Tani ma ahan oo kaliya cuntada oo dhan annaga oo badanaaba aaminsano, laakiin sidoo kale ku saabsan habka nolosha, "moral morality". Dhaqanka Muslimiinta ayaa qiyaasaya in mid ka mid ah uu cuno hilibka doofaarka iyo khamriga. Haddii qoraallada diineed ay ka hadlaan cabitaanka, waxa ku saabsan sida loo isticmaalo alaabooyinkaas (xittaa hab ku yar) jirka? Waa Machadka Istaandareynta iyo Metrology ee Dalalka Islaamka, oo markaa tilmaamaya tilmaamaha wax ku oolka ah ee ay tahay inay soo saaraan soo saarayaasha iyo ganacsatada xayawaannada halal ah, sida uu qabo xeerarka diineed. Marka laga reebo lipsticks iyo cadayga oo si toos ah ula xiriiraya afka, waxba maaha sida nadaafadda nadiifinta iyo qurxinta.
Riixaya fikradda ilaa ugu dambaysta, noocyada qaar ka mid ah ayaa sidaas daraaddeed abuuray daawooyinka la isku qurxiyo kuwaas oo ka kooban hilibka doofaarka ma (baruurta ama gelatin), khamriga (xataa khamriga denatured ama alcohols dufan), ama xitaa u yeela cayayaanka (cochineal waayo, pigments dheeh). noocyada waxay ku xooga saaraan in ay calaamadda Guddiga Maamulka Xalaasha, cabbirka caalami ah shahaado.
Loogu talagalay Muslim, badan (yar) magac yihiin madax ganacsatada ka soo jeeda bulshada Muslimka ah, iyo inta badan ee qurba joogta ah, Jamal (France), Samina saafi ah ka samaysaa Up (UK), Mid ka mid daahir ah (Canada ) Care Shfee xalaal ah (Netherlands) ...
Afrika laba xawaare.
Waqooyiga Afrika, dejinta xallinta waa mid ka mid ah mudnaanaha wasaaradaha dhaqaalaha (gaar ahaan Morocco) halkaas oo la doonayo in lagu sameeyo dadaal kasta oo lagu horumarinayo warshadaha maxalliga ah si ay u horumariyaan ugana dhoofaan alaabooyinka la mamnuucay ee gobolka. dunida oo dhan.
Gobolka Afrikada Saxaraha hoose, ayaa leh laba nooc oo caqabado waaweyn ah. Dhanka kale, dareen dhab ah oo loogu talagalay magaca Faransiiska iyo Mareykanka. Dhinaca kale, isticmaalka alaabooyinka dabiiciga ah iyo cuntooyinka jira "homemade" ee waddankooda.
Kooxaha waaweyn "Islaam-saaxiibtinimo".
2012, Colgate-Palmolive waxay iibisay daawada ilkaha caleenta ah iyada oo aan laga helin jaleeco. Halkii ay u jahwareersan yihiin shahaadooyinka Halal iyo isbeddelka qummanaanta, magaca ugu muhiimsan wuxuu ku tiirsan yahay suuqgeynta dhaqanka ee alaabteeda: asal ahaan shamis. Ambalaasta Orientalizing iyo taageerida mooshiyaha ah, Unilever iyo Henkel waxay soo saartey alaab si gaar ah loogu talagalay daaweynta timaha ee dumarka qaawan. Unilever Group iyo nooca Sunsilk waxay abuurtay nadiifinta shaambada nadiifka ah iyo nadiifka ah, oo loogu talagalay haweenka xiran timaha iyo timaha ay si gaar ah u waxyeeleynayaan qulqulka iyo hawo la'aanta. Henkel wuxuu soo saarey Gliss & Restore "koofiyadaha ugu horeeya gaar ahaan timaha daboolan. Sida hoggaamiyaha adduunka, L'Oréal, waxay sheegaysaa in "suuqa xajmiga kalluun ee xayawaanku uu yahay suuq aanu eegno, sida dadka kale, waxaannu siinay hammuunkeenna si loo qurxiyo quruxda".
Marka ugu horeysa ayaa la sameeyay www.panafricanbeauty.com
Inglot - O2M Xalal - Neefsashada ciddiyaha Nool - 619
2 cusub oo ka yimid € 19,81
Iibso 19,92 €
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay Oktoobar 18, 2020 2:01 am
Furaha tiiraanyada - HP Blavatsky (PDF)
Taariikhda taariikhiga ah ee dadka madow (qaybta 1)
Oo laba iyo tobankii qolo ee reer binu Israa'iil (ISIS-RA-EL) ayaa ka yimid Afrika?
Afro, cryptocurrency hore ee pan-African cryptocurrency
Kumaa ahaa Frederick Douglass?